SOMBI WAAN SAREEN SOSSOBAN! -
By Falmataa | January 19, 2018
Qixxeessaa Lammii | Amajjii 19, 2018
Qabsoo ummataa kara dabarsuuf dabni wayyaaneedhaan raawwatamaa jiru warraaqsa gufachiisuu hin danda’u. Oromoon Oromiyaa fi Oromiyaan alatti wayyaaneen hidhame cufti kan hidhame maqaa ABOn malee yakka dalage hin qabu. Miseensotni dhaaba Dr Maraaraan durfamu keessa jiranillee kan hidhamaniin maqama kanaan akka ta’e ifa. Qabsoo dagaagee Oromiyaa bira dabree biyyattii guutuu irra gara gale duubatti deebisuuf hidhamtoota siyaasaa gadi dhiifna jette keessaa namoota muraasa coktee gadi dhiisuun warraaqsa dhoohe deebitee ukkaamsuu hin dandeettu. Gaaffii warraaqsi gaafate deebii kennuu dhiistee waan hin fakkaatne gochutti seenuun isii kanuma kufaatii isii daran jarjarsu malee kan kufa irraa isii hambisu miti.
Mana hidhaa isiif dhuunfatu dhabde malee wayyaaneen ummata Oromoo guutuu maqaa ABOn hidhuu feeti. Kan hiitee harkaa qabdu dhiisii isa hin hidhamin jiruu walitti qabdee hidhuuf yaadni isiin qabdu dheeraadha. Biyya isaa irratti ajjeeffamuu fi hidhamuun Oromoo isiidhaaf gammachuu hanga hin qabne. Fedhiin isii ummata kana lafa irraa fixxee biyya qofa hambifachuu akka ta’e raawwiidhaan argisiiftee jirt. Hidhamuu fi gadi dhiifamuu irratti kan labsa baasu ilma Tigreeti. Murtii du’aa dhala Oromoo irratti kan lallabu ilma Tigreeti. Nagaya Tigraay dhugoomsuuf Oromoon dirqitti dhumuu qaba. Ummata Oromoo bara 1991 irraa hamma sokondii kanaatti hidhamee hidhaa keessa jiru gadi dhiisuu diduuf Dr Maraaraa qofa hidhaa baafne jettee odeessiti. Gowwaan shira lafa jalaan ummata Oromoo irratti isiin raawwachaa jirtu hin beekne kanuma qofaan gammadee isii faarsutti gadi bahe hedduudha.
Dhala Oromoo dhume, hidhame, biyya isaa irraa ari’ame, qaamaa hir’ate, hiyyoomee laakkofsi isaa hin beekkamne dagachuu hin barbaachisu. Gaaffii saba keenyaaf deebisaan quubsaan namoota tokkee mana hidhaatii baasuu osoo hin taane wayyaaneen guutuu guututti Oromiyaa gadi dhiiftee bahuudha. Oromoo fi Oromiyaan walitti hafuudha. Deebisaaleen shunfurreen wayyaaneen Oromoof safaraman gaaffii Oromoof deebii ta’uu akka hin dandeenye beekuu barbaachisa. Dhalli Oromoo asii achi wayyaanee irraa bu’aa eeggatu hin qabu. Bu’aa ba’ii ulfaataan firii argamsiifate jabeeffatee qabsoo isaa daran itti fufuu qaba. Ebaluun hidhaa gadi dhiifne, abaluun hidhaa keessatti dhiifne, ebaluuf dhiifama goone, abaluun du’a ykn umrii itti murteessine jechuu wayyaanee taa’ee caqasuu hin qabu.
Ajjeefamuu, hidhamuu, ari’atamuu, saamamuu, salphifamuu, tuffatamuu irraa kan ummata Oromoo hambisu qawwee qofa. Qawween qawwee hin gabbartu. Qawween Tigree ibidda tuftee qawween Oromoo bishaan hin tuftu. Gootummaa isiin afaan qawweetiin ofiin dhaaddu afaan qawweetiin irraa fuudhanii salphisuu irra furmaatni gara biraa kan Oromoof hafe hin jiru. Bu’aalee bubu’oo gara garaa wayyaaneen kennamuun asii achi dhalli Oromoo sobamuu hin qabu. Oromoon saree sombaan sossoaban akka hin ta’in ummatni Oromoo wayyaanee Oromiyaa keessaa xuruuree baasuun qabsoo isaa injifatnoon guduunfachuu qaba.
ABO, WBO, QEERROO BILISUMMAA OROMOO, SBO fi ONN daandii qabsoon walabummaa fi bilisummaa irraan furga’aa jirtu waan ta’aniif OPDO, OBN, OMN, QC, ABOT, ATWO, ODF fi kanneen biroos ummata isaanii afanfaajjawiinsa biraa keessa galchuuf carraaquu irraa qusatanii karaa tokkicha ariitiin qabsoo keenya galmaan gahu kana irratti deebi’uu qaba. Kun ammoo, iftaan, boru, har’a osoo hin ta’in amma ta’uu qaba.
ABOn, WBOn, QBO, SBOn, ONN fi dhaabbileen mirga saba Oromoo kabajjiisiifuu haqaan dhaabbatanii sochii haqaa irra jiran cuftuu haa lalisan. Milkiin Oromoo dacha dachaa haa ta’u!
Qixxeessaa Lammii irraa
← SBO Sagalee Bilisummaa Oromo, Amajjii 19, 2018 SQ: Sagalee Bilisummaa Qeerroo Oromo, Amajjii 19, 2018 →
Warming and deforestation threatening coffee species, including Ethiopia’s Arabica, scientists warn January 17, 2019
Is Tigray really a drop in the bucket for Abiy’s administration? January 17, 2019
Uummata mesha maleeyyii maanguddoota dabalatee ajjeesuuf hidhuun, dararaa irratti raawwachaa afaaniin bilisummaa labsuun gaafatama seeraaf seenaa jalaa nama hinbaasu! January 17, 2019
Gaala Hatanii Gugguufanii Deemuun Dhokachuu Hin Tahu January 17, 2019
Nearly 36 million children in Ethiopia are poor and lack access to basic social services, a new report reveals January 17, 2019
Ethiopia fuel squeeze and Djibouti’s continued economic importance January 17, 2019
Nama Ajjeessuun Mo’amuu Dha January 17, 2019
Oduu social media irraa guurame rakkoo ABO fi OPDO ilaalchisee, Amajjii 16, 2019 January 16, 2019
Ethiopia says launches offensive against Oromo rebels January 16, 2019
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Amajjii 16, 2019; BBC, VOA on Moyale January 16, 2019
Dubbii WBO Gujii January 16, 2019